‘सबै व्यवसायीले कालोबजारी गर्छन् भन्दा अन्याय हुन्छ’ औषधि व्यवसायी आचार्यसँगको अन्तरवार्ता – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:५५ English
‘सबै व्यवसायीले कालोबजारी गर्छन् भन्दा अन्याय हुन्छ’ औषधि व्यवसायी आचार्यसँगको अन्तरवार्ता
काठमाडौँ, १० जेठ । रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका ५ मा जन्मिएका भुबन आचार्य पछिल्लो समय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै जनसेवामा खटिरहेका छन् । काठमाडौँमा ‘टाइगन मेडिसियन सप्लायर्स’ सञ्चालन गर्दै आएका उनको सहयोग ग्रामिण भेग र गरिबहरुप्रति लक्षित छ । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण देशको सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्र नै आतङ्कित छ । यस्तो बिषम् परिस्थितीमा औषधी ब्यबसायीहरुको भूमिका के हुन सक्छ त ? यस्तै विषयमा केन्द्रि रहेर औषधी व्यवसायी आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः
तपाई यो औषधी व्यबसायमा लागेको कति भयो ? यो पेशाबाट सन्तुष्ट त हुनुहुन्छ नि ?
मैले यो औषधी क्षेत्रमा काम गरेको ठ्याक्कै दश बर्ष भयो । बाकि रह्यो सन्तुष्टको कुरा । हेर्नुस् यो क्षेत्र भनेको सेवा गर्ने क्षेत्र हो। आम नेपालीको सेवा गर्न पाउदा को चाहि खुसी हुदैन होलाररु म त यो आफ्नो पेशाप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छु ।
अहिले नेपाल कोरोना भाइरसको कारण आक्रान्त बनेको छ, यो बेला तपाईहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नि हैन र ?
हो, सही बिषयको उठान गर्नु भो, हामी औषधी व्यबसायीहरुको प्रतिबद्धता नै छ कि राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट पर्यो भने दिलो ज्यान दिएर लाग्ने भनेर । नभन्दै अहिले यस्तो संकट आइपुग्यो यस्तो समयको कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । अहिले बिश्व नै लकडाउनमा छ तर हेर्नुस् हामी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै नियमित औषधी सप्लाइमा खटिराका छौ । हामीलाई पनि रोगसंग त डर हुन्छनि हैनर ? यद्यपि हामी सबै कुरा भुल्दै देशका सम्पूर्ण ठाउमा औषधीको हाहाकार नहोस् भनेर आफ्नो कर्तब्यलाई पुरा पालना गरिरहेका छौ । यो भन्दा पनि ठूलो अर्को कुनै भूमिका होलार ?
तपाइले स्वास्थ्यको कुरा उठाउनु भो, सरकारले पनि त तपाईहरुलाई सुरक्षित हुने वातावरणको ब्यबस्था मिलाएको होला नि ?
मैले सरकारले केही गरेन भनेको नै छैन, हेर्नोस् हामीलाई सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको गरिरहेको छ, तर जति गर्नु पर्थ्यो त्यो अझ पूर्ण छैन । उसो त यो कोभिड–१९ को सबैभन्दा सुरक्षित हुने प्रमुख माध्यम भनेकै एकान्तबास हो । अब हामीमा यो लागु हुन सक्ने कुरै भएन । हरेक समय हामी सडकमा दौडिरहेका हुन्छौ, त्यसैले पनि हामीलाई कसैले चाहेर पनि पूर्ण सुरक्षित बनाउन सक्दैन। यसो भनिरहंदा हामी पूरै असुरक्षित छौ भन्ने पनि छैन । सकेसम्म सुरक्षित बन्ने कोशिस गर्दै हामीले सेवा दिई रहेका छौ ।
जस्तो कि राज्यमा कुनै रोगको महामारी आयो भने त्यो रोगसंग सम्बन्धित औषधीहरुको बजारमा पुरै अनिकाल लाग्छ. कोरोना आएपछि पनि माक्स र सेनिटाइजर जस्ता संबेदनशील बस्तुको अभाब खड्कियो, आबश्यकभन्दा बढी मूल्य तिरे पाइने नत्र नपाइने, यसको मतलब तपाईहरु पनि कालोबजारीमा त अगाडि नै हुनुहुन्छ नि हैन र ?
तपाईले उठाएको प्रसङ्गमा म केही सहमत छु , केही असहमत छु । जस्तो कि बजारमा माग बढेको बेला औषधिको अभाब हुने कुरा ठीक हो। त्यो भइरहेको पनि छ, हामी सबैले भोगि पनि रहेका छौ, तर कालोबजारी हामीबाट भयो भन्नु भगवान बुद्धले पाप गरे भन्नु जस्तै हो । हेर्नुस् हामी औषधी उत्पादक हैनौ बिक्रेता हौ । हामीसंग कम्पनिबाट आएको औषधी हामीले बजारमा पठाउने हो । हामीसंग नै भएन भने के पठाउने ? हामीले पनि सुनेका छौ केही मेडिकलहरुबाट कालोबजारी भयो भनेर, यो त राज्यले अनुगमन गरेर सम्बन्धित ब्यक्तिलाई कार्बाही गर्नु पर्यो नि ? अर्काले गरेको गल्तीको भागेदार हामी हुने कुरै आएननि।
बजार अनुगमनको बेला प्रायः औषधी पसलमा धेरै जसो डेट एक्सपाएर औषधीहरु ठूलो मात्रामा नियन्त्रणमा लिएको न्यूजहरु आउने गर्छ, नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो संवेदनशील कुरामा किन तपाईहरुको यस्तो हेलचक्रयाई भैरहेको छ ?
मैले अघिनै भनिसकेको छु, हामी सप्लाएर्स हौ । हामीले बजारमा गुणस्तरीय औषधी पठाउछौ । खुद्रा औषधी पसलहरुले कुनै औषधीको मिति सकिएको जानकारी पठाए भने हामी फिर्ता ल्याएर त्यस्ता औषधीको डिस्पोजल गर्छौ । हामीलाई खबरै भएन भने त के थाहा हुन्छ र ? तसर्थ यो बिषयमा हामी धेरै चनाखो छौ । बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो कुरा हामी ब्यबसायीलाई पनि सह्य छैन र हुँदैन पनि ।
फरक प्रसङ्गको एउटा कुरा गरु, तपाईले बिभिन्न ठाउँ बेला बेला स्वास्थ्य शिविर राखेर निशुल्क औषधी बितरण गरिरहनु हुन्छ, यो सस्तो लोकप्रियताको लागि त हैन नि ?
मित्र हजुरले पनि देख्नु भएकै छ, विगतदेखि वर्तमानसम्म मैले धेरै ठाउमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर राखेर दुर्गम भेगका नागरिकहरुलाई सेवा गरिरहेको छु । मैले यसबाट केही लाभ लिएको पनि छैन र मलाई भोलिको दिनमा पनि केही आशा छैन । मलाई लोकप्रियता कमाएर केही गर्नु पनि छैन । मैले मेरो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग मात्र गरेको हो । यसलाई कसैले अर्कै अर्थमा बुझ्छ भने ‘कुण्ड कुण्ड पानी , मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ भनेर बुझौ । अरु मलाई यो बिषयमा केही भन्नु छैन ।
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १९:०८ मा प्रकाशित